हाम्रो मेलिंग सूचीको लागि साइन अप गर्नुहोस् • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउन कार्यक्रमहरू, समाचारहरू, र जानकारी तपाईंको इनबक्समा डेलिभर गरिएको डचटाउनस्टाईल मेलिंग सूचीमा शामिल हुनुहोस्! हामी एक महिनामा दुई वा तीन ईमेल मात्र पठाउछौं, केहि अधिक छैन।
हामीलाई केवल तपाईंको नाम र ईमेल ठेगाना चाहिन्छ। यदि तपाईं केहि थप जानकारी प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ भने, स्वतन्त्र महसुस तल तल गर्नुहोस्। तपाईलाई राम्रोसँग चिन्नुले हाम्रा छिमेकीहरूसँग अझ बढी प्रभावकारी रूपमा संलग्न हुन मद्दतको लागि लामो यात्रा गर्न सक्छ।
तपाईं कस्तो प्रकारको चीजहरूको लागि स्वयम्सेवा गर्न चाहनुहुन्छ?
डिजाइन: शारीरिक सम्पत्ति, सार्वजनिक ठाउँ, सुरक्षा पहल, सफा आर्थिक जीवन्तता: व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउँदै, लगानी आकर्षित गर्दै, ट्र्याकि development विकास संगठन: कोष सising्कलन, अनुदान लेखन, स्वयम्सेवक भर्ती पदोन्नति: योजना र समन्वय घटनाहरू, सेटअप र टेकडाउन, छिमेकीहरू र आगन्तुकहरूको साथ संलग्न लागू हुने कुनै पनि जाँच गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै दायित्व वा प्रतिबद्धता छैन।
के तपाइँ कुनै अन्य टिप्पणीहरू थप्न चाहानुहुन्छ?
तपाईं कुनै पनि समयमा सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्न वा सरोकार छन् भने, कृपया स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
डचटाउन STL.org हाम्रो पत्राचार सूचीका लागि साइन अप गर्नुहोस्